NETA Automobile က အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင် မှုစနစ် TA Pilot ကို မိတ်ဆက် - Pandaily
NETA Automobile က အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင် မှုစနစ် TA Pilot ကို မိတ်ဆက်
Mar 01, 2022, 13:05ညနေ 2022/03/01 14:08:11 Pandaily
Hozon Auto ၏ လက်အောက်ခံ လျှပ်စစ် ကား အမှတ်တံဆိပ် NETA Auto သည် တနင်္လာနေ့က ၎င်း၏ ပေကျင်း ဒီဇိုင်း စင်တာတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ကိုယ်ပိုင် စမတ် မောင်းနှင် မှုစနစ် ဖြစ်တဲ့ TA Pilot ကို ထုတ် လုပ်ပြီး.
TA Pilot ကို NETA ရှိ နောက်ဆုံး အက္ခရာ နှစ်လုံး ဖြင့် အမည် ပေးပြီး Talent အတွက် အတိုကောက် ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ “ပါရမီ ရှင် လေယာဉ်မှူး များ” ကို ဆိုလိုသည်။ ပလက်ဖောင်း ကို ၂. ၀ မှ ၅. ၀ အထိ အဆင့် လေး ဆင့် ခွဲထားသည်။
TA Pilot 2.0 သည် ADAS (Advanced Driving Assistance System) ဖြစ်ပြီး အဝေးပြေး လမ်း များနှင့် မြို့ လမ်းများ ပေါ် တွင်အသုံးပြု နိုင်ပြီး NETA V နှင့် NETA U Pro စီးရီး များတွင် အချို့သော မော်ဒယ် များတွင် ရရှိနိုင်သည်။ TA Pilot 3.0 သည် ဗားရှင်း ၂. ၀ တွင် အဝေးပြေး လေယာဉ်မှူး အထောက်အကူပြု မောင်းနှင်မှု ကိုထည့်သွင်း ပေးခဲ့သည်။ TA Pilot 5.0 သည် ဖွံ့ဖြိုး ဆဲဖြစ်သည်။
TA Pilot 4.0 သည် အဝေးပြေး လမ်းမ များနှင့် မြို့ လမ်းများ ပေါ်တွင် လေယာဉ်မှူး အကူအညီ ပါ ၀ င်ပြီး အမှတ်တံဆိပ် ၏အ ထင် ကရ sedan NETA S တွင် ရရှိနိုင်သည်။
နောက်ပြီး TA Pilot 4.0 မှာ Huawei MDC610 Chip ကို အသုံးပြု ထားပြီး ထိပ်တန်း အဆင့် တွက်ချက်မှု အကြိမ် ၂၀၀ ကို လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ Huawei သည် hardware support ကိုသာ ထောက်ပံ့ ပေးပြီး software ကို NETA ၏ ကိုယ်ပိုင် အသိဉာဏ်ရှိသော မောင်းနှင်မှု အဖွဲ့က ကိုင်တွယ် သည်။
Huawei ရဲ႕ MDC610 Chip ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ တာလဲ လို႔ ေမး တဲ့အခါ NETA က ထုတ္ကုန္ ဟာ အဓိက ကုန္က်စရိတ္ အားသာ ခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ က အသင့္ ေတာ္ ဆံုး ေရြးခ်ယ္ မႈ ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။ ထို့အပြင် NETA က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ချစ်ပ် စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို အထောက်အကူပြု ရန် ၎င်း ၏အခန်းကဏ္ realized ကို သတိပြုမိ ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Sensing hardware ပိုင္း မွာေတာ့ TA Pilot 4.0 မွာ Huawei ကေန Solid-State Lidar ၂ လံုး၊ Aid Driving Camera ၁၁ လံုး၊ Millimeter Wave Radar ၅ လံုးနဲ႔ Ultrasonic Sensor ၁၂ လံုး တပ္ဆင္ ထား မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိကျ မှန်ကန်သော တည်နေရာ အနေအထား နှင့် ရေကြောင်း သွားလာ မှု နည်းပညာ များလည်း ပါဝင် မည် ဖြစ်သည်။
TA Pilot 4.0 ကိုမိတ်ဆက် ခြင်းအပြင် NetTower Motors သည် တနင်္လာနေ့တွင် ပြုလုပ်သော ပွဲတွင် သူတို့၏ စမတ် မောင်းနှင်မှု အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ အချိန်အထိ NETA Intelligence Institute တွင် ၀ န်ထမ်း ၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် ၁၀၀၀ အထိရောက်ရှိ မည်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Hozon Auto က Qihoo 360 လုံခြံုရေး နည်းပညာ တပ်ဆင် ထားတဲ့ ကား သစ်ကို မိတ်ဆက်
R & D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအရ Neta Motors သည် စမတ် မောင်းနှင်မှု နယ်ပယ်တွင် နှစ်စဉ် ယွမ်သန်း ၈၀၀ မှ ၁ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၇ သန်းမှ ၁၅၈ သန်း) အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်မျှော်လင့် ထားပြီး စမတ် ဌာန ၏စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သည်ယွမ် ၁၀ ဘီလီယံ အထိရောက် ရှိလိမ့်မည်။
Huozong ၏ ၁၀၀၀၀၀ မြောက် မော်တော်ယာဉ် သည် အော့ ဖ် လိုင်း ဖြစ်သည်
တ႐ုတ္ ကား ကုမၸဏီ Huozong Automobile သည္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္က ၎၏ ၁၀၀၀၀၀ ေျမာက္ လွ်ပ္စစ္ ကား ထုတ္လုပ္ မႈ (EV) ကို ႀကိဳဆို ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လွ်ပ္စစ္ ကား မ်ားအနက္ ပထမဆံုး မွ တစ္သိန္း အထိ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ရန္ ၄၂ လသာ လို ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Hausen Automobile သည် ယခုနှစ်တွင် စာရင်းပြုစု ရန်အတွက် ငွေကြေး အစီအစဉ်ကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
Hozon Motors သည် မကြာသေးမီက ယွမ် ၂ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၃ ၁၆ သန်း) ကျော် သော ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု အသစ်ကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
Auto Feb 21 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 21, 2022